iWatermark + Uncedo | Plum emangalisayo
Umsebenzisi wokuqala? Sukuma ukhawuleze ukhawuleze kunye neWatermark + ividiyo tutorials.
I-10/9/20 i-iOS Version 6.3.1 iyafumaneka ngoku. Isebenza kakuhle kwi-iOS 12, 13 kunye nakwamva nje iOS 14. Ukubeka imvume echanekileyo kulula kodwa kubalulekile funda oku:
OKUBALULEKILEYO: Ukuba usebenzisa i-iOS 14 kunye neWatermark + kukho izinto ezimbini ekufuneka uzazi. 2. Qiniseka ukuba usete imvume yefoto ngokuchanekileyo. Xa ufika kule ncoko yeApple yeMvume kwasekuqaleni kubalulekile ukuseta le mvume ngokuchanekileyo ukunqanda iingxaki.
KUBALULEKILE: Ukuba awuzange wenze oku kungasentla okokuqala ukhetha iifoto, iifoto zokubukela izinto kunye nezinye izinto aziyi kusebenza. Ukuba ukwenzile oko kufuneka utshintshe imvume ngokuya kuseto lweApple kwaye uthayiphe 'iWatermark +' apha ngasentla:
Kwi-iOS kwinguqulelo ye-beta inqaku elitsha linceda abantu ukuba babone iintlobo zeefayile. Kwi-Mac iintlobo zeefayile zibaluleke kakhulu ukuziqonda. Kwi-Apple i-Apple yenze isigqibo sokuyigcina ilula kwaye ingabonisi ulwandiso lwefayile okanye iintlobo zeefayile. Kodwa kulondolozo lwabantu abantu kufuneka bazi uhlobo lwefayile abayijongayo. Kubaluleke ngakumbi xa ungenisa i-logo (ekufuneka ijongeke kakhulu kufuneka ibe yi-.png). Ke, songeze amandla okubona ngokulula izandiso zeefoto kwiWatermark +
Uyibona njani iiLwandisoCofa kwi icon yeendaba qinisekisa ukuba 'Khetha Iifoto ' ukubona iithonjana ezibonisa uhlobo lwefayile, hayi 'Khetha ifoto'.
Eli linqaku elinye elitsha oza kulibona kuhlobo 6.0. Cofa u ⓘ ngasekunene. Qaphela iintlobo ezahlukeneyo zefayile, i-heic, jpg, png, dng, gif, njl njl. Cofa u ⓘ kwakhona ukujikeleza ubungakanani befoto, ixesha lokudala ifoto / umhla. Ulwazi olusebenzayo oko kukuthi kuphela ifumaneka kwisikhethi semifanekiso emininzi hayi kwisithethi esinye. Ewe ungasebenzisa iipikethi ezininzi kwiifoto ezingatshatanga. Abanye benu baya kubuza, "Kutheni kuphela kwisithethi semifanekiso emininzi?" Isizathu sokuba sidale isikhethi esinemifanekiso emininzi thina ngelixa isikhethi esinye senziwe yiApple.
IINGXAKI: Abanye abasebenzisi baye bazibonela ekugqibeleni ukuba banenkcazo. Umsebenzisi uya kubeka ifayile yelogo (png ngokubonakala) kwisixhobo sabo se-iOS. Kwi-iWatermark bayangenisa ifayile kwaye uphawu lubonakalise njengebhokisi emhlophe akukho bungqina bubonisa mva.
ISOLU: Umsebenzisi, uMark Craddock, ufumanise ukuba oku kuyenzeka ukuba ifayile ye-png ifakwe kwi-Apple iCloud Shared Album. Umsebenzi: Sukusebenzisa iApple iCloud ekwabelwana ngayo ngeAlbhamu. Ukuba ufuna ukusebenzisa i-logo / png ngokungafihlisiyo usoloko usithumela kwisixhobo sakho usebenzisa i-imeyile okanye i-airdrop. Isiphene ASIKHO kwiWatermark. Sikuxelile oku kwifom yengxelo ye-bug ye-Apple apha kwaye sinethemba lokuba i-Apple izakuyilungisa kungekudala.
Sisandula ukuva kumsebenzisi onencoko yababini esithi iimvume zakhe zokufikelela kwilayibrari yeefoto kwiWatermark + yayithintelwe kodwa owoyisombulula namhlanje ngokucima iApple's Screen Time. Ixesha leScreen lika-Apple yinkqubo entsha enokusikela umda kwinto onokufikelela kuyo kwifowuni yakho. Ukwenza izinto zidideke ngakumbi intloko yosapho inokusetha ixesha leScreen iimvume zamanye amalungu osapho izixhobo. Ukuba unengxaki sicebisa ukuba uyicime kwaye uzame kwakhona. Okungakumbi ukufunda ngezantsi…
Ukuba unawo nawuphi na umba, qiniseka ukuba usebenzisa uhlobo lwakutshanje, emva koko yiya kwinkxaso yetekhnoloji kwiinkcukacha ze-imeyile kunye nezikrini.
Jonga iClock ye-Mac okanye iWatermark Pro ye-Mac okanye u-Win ngokuthe ngqo kwindawo yethu. Cofa oku ikhonkco liza kufumana i-20% ezenzekelayo kwinqwelo yakho kuyo nayiphi na usetyenziso kwi-plumamazing.com indawo.
Ingxaki? Sithumelele i-imeyile. Uphengululo lwenkwenkwezi e-1 kwi-iTunes xa ungafumani sethingi ayenzi nto kuwe okanye kuthi. Qhagamshelana nathi kwaye sinako ukukubuza imibuzo kwaye siyilungise okanye sichaze into ekufuneka uyenzile. Siyathanda ukuva kuwe njalo Imeyli (iinkcukacha kunye nooncedo lweesikrini) ukuba unombuzo okanye ingxaki engagutyungelwanga yile ncwadana. Enkosi.
Enkosi ngokukhuphela iWatermark + lelona lungu lisemtsha nelona lisapho liphezulu kusapho lweWatermark. iWatermark sesona sixhobo seqonga sithandwa kakhulu esikhoyo kwi IMac kunye neWindows njengeWatermark Pro. 30% isaphulelo kubanini beWatermark + kunye neWatermark . I-iWatermark ikuvumela ukuba ungeze ii-watermark zakho okanye ezeshishini kuyo nayiphi na ifoto okanye ividiyo. Nje ukuba le watermark ibonise indalo yakho kunye nobunini bale foto okanye ubugcisa.
Yintoni iWatermark? IWatermark sisoftware yokufota enobuchule evumela uhlobo olutsha lokujonga. Isebenzisa iintlobo zokubonakala kwamehlo zedijithali ezingabonakaliyo (ezingafumanekiyo nakwezinye iinkqubo zokusebenza) ukudibanisa ifoto nomdali wayo.
Iwermark iifoto ngayo nayiphi na kwizinto ezisi-9 ezibonakalayo nezili-2 ezingabonakaliyo.
Iifoto ezivela kwiikhamera azaziwa. Xa uthatha ifoto kwaye wabelana ngayo, abahlobo bakho bayabelana ngayo, emva koko nabahlobo babo, emva koko abantu abangabaziyo. Ngalo lonke ixesha inezinto ezingaphantsi nangaphantsi kwaye ekugqibeleni akukho nxibelelwano kuwe. Ukuya kwihlabathi liphela ifoto yakho 'ngumdali ongaziwayo'. Uninzi lweefoto ezintle zihamba ngentsholongwane (ziye zaziwa ngokuxhaphakileyo) ezingaswelekanga nakuphi na ukwaziwa komniniyo. Oko kuthetha ukuba, ngaphandle kwayo nayiphi na indlela yokuba abanye banike umbulelo, umbulelo okanye intlawulo kumnini. Isisombululo kule ngxaki yiWatermark, injongo yayo kukufaka iifoto zakho kunye nesazisi sakho ngeendlela ezahlukeneyo, ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Itekhnoloji ekwiWatermark kunye nezixhobo ze-watermark ezili-11 zikunceda ukuba utyikitye, wenze ngokwakho, wenze isitayile, ukhusele kwaye ukhusele iifoto zakho.
Izixhobo eziBalulekileyo ze-2
2. Emva koko ukhethe (ukuqaqambisa okanye ukukhangela) i-watermark okanye iawermark. Okanye, ngokuzikhethela, yenza entsha ngo ukungenisa okanye kwiintlobo ezili-11 ze-watermark, hit 'Kwenziwe'
Vula iWatermark +. Oku sikubiza ngokuba yiKhasi le-Canvas. Apha uqala indalo kwaye ujonge ngaphambili umsebenzi wakho wobugcisa. Ezantsi kukho ibar ye-Nav.
emazantsi ephepha le-Canvas elingentla (ngentla) ukubona uluhlu lwee-watermark kwinto esiyibiza ngokuba luLuhlu lweeWalmark Page (ngezantsi). Unokukhetha kwakhona 'Yenza iWatermark' phezulu kwiphepha.
3. Cofa ngokulandelayo kwicala lasekhohlo le-watermark 'Ilungelo lokushicilela' (ngasentla). Kwimpompo i-watermark isuka ngwevu / ingasebenzi iye kohlaza okwesibhakabhaka / esebenzayo / ephawulweyo / enophawu lokujonga oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphambili ukubonisa ukuba iyasetyenziswa ngoku. Chukumisa iqhosha elithi 'Lenziwe' ukubuyela kwesona sikrini siphambili (apha ngezantsi) kwaye ngoku uya kuyibona loo watermark yeLungelo lokushicilela kwiphepha leCanvas.
Uyibona njani iiLwandisoCofa kwi icon yeendaba, qiniseka ukuba 'Khetha iifoto (ngolwazi) ' ukubona iithonjana ezibonisa uhlobo lwefayile, hayi 'Khetha ifoto'.
Cofa u ⓘ ngasekunene. Qaphela iintlobo ezahlukeneyo zefayile, i-heic, jpg, png, dng, i-gif, njl. (Umfanekiso ongezantsi) obonisa phezulu ngasekhohlo kwithonjana ngalinye. Cofa u ⓘ kwakhona ukujikeleza ubungakanani befoto, ixesha lokudala ifoto / umhla. Ulwazi olusebenzayo oko kukuthi kuphela ifumaneka kwisikhethi semifanekiso emininzi hayi kwisithethi esinye. Ewe ungasebenzisa iipikethi ezininzi kwiifoto ezingatshatanga. Abanye benu baya kubuza, "Kutheni kuphela kwisithethi semifanekiso emininzi?" Isizathu sokuba sidale isikhethi esinemifanekiso emininzi thina ngelixa isikhethi esinye senziwe yiApple.
Iphepha loLuhlu lweeWermark yilapho ungadala khona (phezulu) kwaye ugcine zonke ii-watermark zakho (ezantsi ngezantsi). I-watermark okanye ii-watermark ezikhethwe kolu Luhlu lwe-Watermark ziyavela kwiKhasi le-Canvas. Apha unokukhetha, uphindaphinde, ucime kwaye uvale ii-watermark.
Thepha 'Hlela' phezulu ngasekhohlo emva koko tsala le icon ngasekunene okanye ezantsi ukuze uphinde ucwangcise iodolo. Okanye ucime iawatchards ngokuchukumisa ibhola ebomvu kwicala lasekhohlo.
Kwimpompo ephezulu '+ Yenza i-watermark entsha' okanye i icon + ezantsi. Oku kukusa kwiphepha 'elitsha leWatermark' (ngezantsi). Ngolwazi oluthe kratya ekwenzeni i-watermark entsha, cofa umfanekiso-skrini ongezantsi.
Ukukhetha ii-watermark ezininzi uthepha kwenye ukuze ukhethe nayo.
(kwicala lasekunene) ukuya kwiphepha lezilungiselelo zelo watermark.
Thepha kwaye ubambe i-watermark ukuyikhetha, ngokungakhethi zonke ezinye (ngaphandle kwe "zitshixiwe"), kwaye uyiveze kwiCanvas iphepha.
Thetha kwakhona i-watermark ukuyikhetha kwaye kwangaxeshanye uyekisa ukukhetha bonke abanye (kodwa hayi ezo "zophiniweyo".) Kwaye kukusa kwisethingi.
Ukushukuma okuphindiweyo, ukucima okanye ukutshixa i-watermark
2) Kwiphepha le-Watermark tyibilika i-watermark eshiyekileyo ukutyhila ukukhiya, ukuphinda kabini kunye nokucima amaqhosha.
Tshixa itshixa iwatch ngalo lonke ixesha. Ukukhetha kwakhona akuyicimi. Oku kwenzelwa ii-watermark ozifuna ngalo lonke ixesha kwaye awufuni ukucima ngengozi.
Phinda kabini-ithatha i-watermark oyithandayo kwaye uyihambise. Ungayisebenzisa njengendawo yokuqala i-watermark entsha.
Cima-icime loo watermark ngokupheleleyo. Akukho kubuya nayo.
Qaphela ukuba ukuqhelaniswa komhlaba (ngezantsi) kususa imeko (yenethiwekhi, ixesha, ibhetri) ngaphezulu, ukubonelela igumbi ngakumbi.
Ividiyo ekhawulezileyo engezantsi ibonisa ukuba yenziwe njani.
Eli phepha lidwelise yonke imizekelo kunye neempawu zamathumbu ezakha zakho.
7. Ifomati yevidiyo ethunyelweyo -Seta ifomathi yevidiyo ethunyelwa ngaphandle nokuba, MOV, MP4 okanye M4V.
8. Ukujonga ukuqaqamba - cwangcisa ukuqaqamba kwepateni yokujonga imvelaphi kwiphepha leCanvas.
9. Ukuphakamisa inqanaba lokusondeza iGlasi -Seta inqanaba lokusondeza kwiglasi yokukhulisa kwiCanvas Page.
10. Ukutyikitya Scan Umahluko - Olu tshintsho lwe-median emiselweyo yeyiphi imibala ye-pixel ethathwa njengemnyama okanye emhlophe kwii-watermark zoTyikityo ezisandula ukwenziwa.
11. Dlala izandi zeMpendulo - dlala izandi uphendula iziganeko.
Iimpawu zamanzi 1
IWatermark ineentlobo ezili-11 eziphambili zamanzi, okubhaliweyo, okubhaliweyo kwe-arc, i-bitmap, vector, umda, utyikityo, i-QR, imethadatha, iStegoMark, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona kunye nefilitha yesiqhelo. Siza kuqala ngeWatch Watermark kwaye siyisebenzise njengomzekelo ukubonisa lonke useto.
Hlela iiSetingi zoMbala-Cofa uhlele phezulu ngasekunene okanye i icon yezicwangciso ezantsi ukuhlela umbala. I-RGB okanye i-HSL ixabiso njenge-0..255 inani elipheleleyo, okanye njenge-00..F hexadecimals. (ngezantsi).
Utshintsho oluzenzekelayo: Oku kungagqibekanga kunye noseto olucetyiswayo. Xa i-Auto ivuliwe (eluhlaza) kwaye utsalela i-watermark ngeenxa zonke ngomnwe wakho okanye usebenzise isilayida uya kuziva 'unamathele' xa i-watermark isondela ezikoneni. Le ikona ekhonjiweyo kwaye uya kubona i icon encinci apho. Igcina indawo yayo ngepesenti eseleyo, ikona ephezulu. IWatermark ithatha isigqibo sokuba yeyiphi ikona ebotshelelwe kwelinye icala 'yiNcwadi'.
Incwadana yemigaqo (ingekho luhlaza) ivumela umsebenzisi ukuba athabathe ikona ekhonjiweyo. Cofa ekhohlo, iZiko, okanye ngasekunene nangasentla, embindini okanye ezantsi. Umzekelo wokusebenzisa useto 'lweNcwadi' kunokuba lapho unebhetshi yeefoto ezisisisombululo esisezantsi kunye nesisombululo esiphakamileyo. Ukuba ufuna isiqwenga sokubhaliweyo sibe kwindawo efanayo yasekhohlo kwifoto nganye emva koko usete indawo ephezulu nasekhohlo kwaye ucime i-Auto.
Ilawula umbala kunye nokukhanya okungaphakathi kwesangqa.
Iimpawu zamanzi 2
Zizo zonke ezinye iintlobo zeetermark. KwiTheyibhile yesiqulatho bafuneka ukuba baphuke babe ngamaqela ama-2 ukulingana nee-smartphones ..
Ungasebenzisa imida ukubonisa umntu okhethekileyo. 🙂
Umfanekiso womzekelo weQR apha ngezantsi ubambe iwebhusayithi yethu ye-url, https://plumamazing.com. Zombini izixhobo zekhamera kwi-iOS (kwi-iOS 11) kunye nenkqubo yeCamera emsulwa kwamanye amaqonga anokuskena kwaye asebenze kulwazi kwiikhowudi zeQR. Zininzi nezinye ii -apps zeskena se-QR ezifumaneka kwiivenkile zeapp. Skena ikhowudi ye-QR engezantsi kwaye ufumane ukhetho lokuya kwindawo yethu ngokuzenzekelayo. Unokwenza indawo yakho enye okanye kulo naliphi na iphepha elinalo naluphi na ulwazi ofuna ukulubonisa.
Ukwenza inkqubo yebatch khetha Khetha Imifanekiso, khetha iifoto ezi-2 okanye ezingakumbi, khetha i-watermark (ii) kunye nokungenisa kwiRhamera yokuHamba. Ukulungiswa kwebatch akusebenzi ku-Facebook, kwi-Twitter, njl. Emva kokuba ifoto yokuqala igqityiwe uya kufumana le ncoko.
I-iWatermark + ibandakanya ukwandiswa kokuhlelwa kwesithombe.
Kwi-iOS 8 inqaku elitsha elibizwa ngokuba yi 'Extensions' longezwa. Izandiso zibonelela ngenqanaba elitsha ngokupheleleyo lonxibelelwano lwesicelo kwi-iOS. IWatermark yinkqubo ezimeleyo kwaye inokujonga ifoto ngaphakathi kolunye usetyenziso njengoko i-Apple ikubiza ngokuba yi'Photo Editing Extension '. Umzekelo ungangena kwi-Apple's Photos app, ukhethe ifoto, ucofe iqhosha elithi 'Hlela' phezulu ngasekunene, ingxoxo inokuvela isithi 'Lo mfanekiso awuhlelekanga. Ufuna ukuyiphinda? ' Chukumisa 'Phinda kabini kwaye uhlele'. Emazantsi eli phepha elitsha lokuHlela ifoto yi-navbar engezantsi.
Cofa amachaphaza ama-3 kwisangqa esimhlophe ukuze ubone ukhetho lwakho lwezandiso. Olu luhlu lweeapps onokuthi uskrole ngasekhohlo, inezinto ezinikezelwa yiApple kunye nezinye iiapps ozilayishe kwisixhobo sakho ezinamakhono okwandisa akhelwe kuzo. Ekupheleni komqolo yi icon yesikwere ene ... kuyo. Cofa oku ukuze ubone zonke iiapps ezibonelela ngokuhlelwa kweefoto. Apha ungabonisa / ufihle kwaye ucwangcise iodolo ekuzo:
Nje ukuba ushenxise iWatermark kuyo yonke indlela yasekhohlo emva koko ucofe i icon (isitampu icon). Iya kuvula kwaye ibonise iphepha elinefoto ekhethiweyo kunye newatermark yokugqibela ekhethiweyo kwiWatermark. Chukumisa 'Yenziwe' phezulu ngasekunene kwi-watermark.
Amanqaku athile kwizandiso.
Ukusebenzisa ulwandiso iWatermark inokuvulwa okanye ivalwe ayinamsebenzi.
° Ulwandiso lunobuchule obunqunyelwe xa kuthelekiswa nokusebenza kwi-iWatermark + app epheleleyo.
° Nokuba yeyiphi i-watermark okanye i-watermark yokugqibela ekhethiweyo kwi-iWatermark yinto eza kubonakala kwaye isetyenziswe.
° Ukutshintsha kwe-watermark esetyenziswe lulwandiso iya kwi-iWatermark kwaye ukhethe ii-watermark (s).
I-Pinch / zoom, ukujikeleza, ukutshintsha indawo ye-watermark inokusetyenziswa.
° Kwiphaneli yolwandiso ebonwe ngentla ungahlengahlengisa ngokutsala ii icon kwizikhundla ezitsha ngokusekwe kusetyenziso. Kwakhona i icon yokugqibela ekunene kolo luhlu ibizwa ngokuba 'Okuninzi' ine icon ye-3 amachaphaza, cofa i icon ukubona iphepha elitsha elibonisa zonke izandiso ezikhoyo. Apha ungahlengahlengisa izandiso kwizinto eziphambili ngokubaluleka kwaye ucime ongazisebenzisiyo.
ICEBISO: Njengokuba i-app yeWatermark iphinda ifoto yoqobo, iwarkmark ikopi yayo kwaye iyigcina kwiKhamera yeKhamera kwaye ikwindawo efanelekileyo kwiAlbhamu yeWatermark. IWatermark ayitshintshi eyokuqala. Njengolwandiso olusetyenziswe ngaphakathi kweApple's Photo app, iWatermark watermark kodwa ukugcinwa kugcinwa yiApple yeApple. Insiza yeefoto igcina lonke utshintsho kwifoto kuloo foto, ke i-watermark kunye nolunye utshintsho lugcinwa njengamaleko. Ukuba ufuna ukuyisusa utshaye uHlelo kwakhona kwaye ubethe Buyela umva ukuze ubuyele kwifoto yoqobo.
Q: Uyintoni umahluko phakathi kweWatermark + yasimahla okanye iLite kunye neWatermark +?
A: Ziyafana ngqo ngaphandle kokuba iWatermark + yasimahla okanye iLite ibeka i-watermark encinci ethi 'Yenziwe ngeWatermark + Lite' ngaphezulu kwayo yonke imifanekiso ethunyelwe ngaphandle. Uninzi luya kuyifumana le nto ihlangabezana neemfuno zabo zokubukela okanye ubuncinci ivumela ukuvavanywa kwesicelo ngokupheleleyo. Ngaphandle koko nyusela kuhlobo oluqhelekileyo olususa loo watermark. Kwinguqulelo yasimahla / yeLite iqhosha lokuhlaziya kuhlobo oluqhelekileyo likwiphepha eliphambili. Ukuphucula kuxhasa ukuvela kweWatermark +.
QYintoni umahluko phakathi kweWatermark + kunye neenguqulelo zedesktop zeMac / Win?
A: Iikhompyuter zedesktop zineeprosesa ezikhawulezayo kunye nememori engaphezulu, ukuze zikwazi ukuphatha iifoto ezinesisombululo esiphezulu. Iinguqulelo zedeskithophu kulula ukuzisebenzisa kwiibatch ezinkulu zeefoto. Inguqulelo yedeskithophu lolunye ikhonkco kwikhonkco lokuhamba kwemifanekiso yeefoto. Inguqulelo ye-iPhone / ye-iPad yenzelwe ukukuvumela ukuba usebenzise touch ukutshintsha iiparameter ezahlukeneyo. Zombini zenzelwe ukulingana nezixhobo zazo. Ngolwazi oluthe xaxe apha iWatermark yeMac kwaye iWatermark ye-Win. Ngeli khonkco ufumana iipesenti ezingama-30 ukhutshiwe nokuba ungaya okanye ungafumana nayiphi na isoftware yethu yeMac njengeClock (kunconyelwe kakhulu ukuvelisa indawo kwiwotshi ye-Apple menubar). Eli likhonkco eliza kubeka i-30% isigqebhezana kwinqwelo yakho. Nxibelelana nathi ukuba unemibuzo. Indawo yethu yile Plum emangalisayo.
Iingxaki / iimpazamo
Q: Kutheni ilogo yam iboniswa njengebhokisi emhlophe / uxande / isikwere / umva endaweni yokuba nenxalenye ebonakalayo.
A: Kuthetha ukuba usebenzisa jpg endaweni ye-png ngokungafihlisiyo. Ukuze ufunde okungakumbi malunga noku iya 'Ukwenza 'iBitmap / iLogo yeWatchermarket'.
Q: Ndinengozi, umyalezo okomileyo okanye impazamo endiyenzayo.
A: Inqabile kodwa ingozi inokuvela ngenxa yezi zizathu zingezantsi. Sebenzisa isisombululo kwingxaki nganye kwezi-5 ukuyilungisa.
1. IngxakiInto engalunganga ngeefowuni OS.
isisombululo: Qiniseka ukuba unenguqulo entsha yeWatermark + kunye neOS entsha. Qala kabusha ifowuni ukuba ubuyisele kwimeko yayo engagqibekanga.
2. Ingxaki: Uhlelo lokusebenza lonakele ngenxa yokukhuphela okonakeleyo.
isisombululo: Cima usetyenziso kwi-iPhone yakho / kwi-iPad uze uphinde uphinde uphinde unikezele.
3. IngxakiIifoto zesigqibo esiphakamileyo zisebenzisa inkumbulo kakhulu kunoko ifumaneka.
S isisombululo: Ukuvavanya ukusetyenziswa kweefoto ze-iPhone / iPad kuqala. Iifoto ze-SLR phantsi kwee-megs ezili-10 kufuneka zisebenze, iifoto ze-SLR ezili-10 okanye ngaphezulu zinokungasebenzi. Into iWatermark + enokuyenza ixhomekeke kuzo zombini isoftware ye-iOS kunye ne-iPhone / iWindows. Iifoto ze-SLR zinokucinezela umda kuxhomekeke kubungakanani beefoto kunye ne-PC yakho. I-iWatermark + isebenza kwiifoto ezinkulu ezake zenzeka ngaphambili kodwa gcina engqondweni ukumiselwa kwememori kwizixhobo zakho ze-iOS, i-iPad Pro yahlukile kunee-4s ze-XNUMX, njl njl. uvavanyo.
4. IngxakiAkukho memori ishiyekileyo kwisixhobo.
isisombululo: Sula ngokulula ipodcast, ividiyo okanye nantoni na okwethutyana. Qiniseka ukuba ubunayo iGig yenkumbulo ekhoyo kwisixhobo sakho.
5. IngxakiIimpawu zamanzi zisebenzisa inkumbulo eninzi kakhulu.
isisombululo: Cima zonke ii-watermark. Emva koko babuyele umva kanye ngexesha. Sebenzisa ii-watermark ezimbalwa kwaye usebenzise ii-watermark ezifuna imemori encinci. 'Iifilitha zesiNtu' kunye 'neMida' kulandelelwano zii-hogs zememori, ulumke usebenzisa ezi. Unokukhaba ezinye iinkqubo ngaphandle kwemisebenzi emininzi ukwenza imemori engaphezulu (i-RAM) ifumaneke.
6. IngxakiIfoto ethile ayizukubukela okanye inike impazamo.
isisombululo: Sithumele ifoto yoqobo kwaye uthumele ezinye iinkcukacha zengxaki.
7. Ingxaki: Iapp iyabanda, ayinakwenza ezinye iintshukumo.
isisombululo: Zama ukujikeleza i-iPhone okanye i-iPad 90 degrees kwaye usazise ukuba ngaba iyayivula le app. Zama kwakhona ukucima ukuba olo khetho kumyalezo wemposiso.
Ukuba uzame zonke izisombululo ezingentla kwaye awukwazi ukulungisa ingxaki emva koko sifuna ukwazi. Sithumelele i-imeyile iinkcukacha ukuba kuvelisa yona. Ukuba sinokuyivelisa kwakhona singayilungisa.
Q: Kulula kangakanani ukuzisusa iiwatchark?
A: Akukho lula. Yinjongo yewatsermark ukuthintela amasela. Kuxhomekeka kwizinto ezahlukeneyo. Ngaba iyabonakala okanye ayibonakali? Kuxhomekeka kuhlobo lwe-watermark (isicatshulwa, umzobo, i-qr, utyikityo, isibhengezo, imigca, ikhampasi, i-stegomark, imethadatha, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, icebo lokucoca njl. Kuxhomekeka ekubeni i-watermark ikuphi efotweni. Kuxhomekeka ukuba ngaba yi-watermark enye okanye ifakwe kumfanekiso. Kuxhomekeka kumbala wewatsermark? Zininzi izinto ezilawula ukuba kunzima kangakanani ukuzisusa. Ekugqibeleni ukuba isela lizimisele, linalo ixesha kunye nezixhobo abanokususa ngazo i-watermark. Ezinye zezindlela ekunzima ngakumbi ukuzisusa. Uthathe isigqibo malunga nento ofuna ukuyiphumeza. Kungenxa yoko le nto iWatermark + inee-watermark ezininzi. Ngamnye uveza uhlobo olwahlukileyo lokuthintela.
ICEBISO: Kumthetho welungelo lokushicilela e-US ukuba kwifoto ebiweyo kufunyaniswe ukuba umntu othile ususile i-watermark ijaji kunokwenzeka ukuba yehle inzima kwisela ngenxa yenjongo ecacileyo.
Q: Ndinayo ifoto yam evaliweyo kodwa ngengozi ndiyicimile ifoto yam yantlandlolo ngaphandle kwe-watermark. Ndingayisusa i-watermark kule foto?
A: Ayilula kwaye ayikho kwi-iWatermark. Ukujonga amanzi kwenzelwe ukukhusela ifoto yakho kunye nokukhusela abanye ekubeni basuse i-watermark kangangoko kunokwenzeka. Kunzima ngabom kwaye kwezinye iimeko akunakwenzeka ukususa i-watermark. Umntu unokuzama ukusebenzisa umhleli weefoto njenge-Photoshop ukuyenza. Kodwa loo nto iya kuba ngumngeni kwaye ayizukubuyisa ifoto kokoqobo.
OKUBALULEKILEYO: IWatermark ihlala isebenza kwiikopi zentsusa kwaye ingaze ibe yeyentsusa. Imvelaphi yakho ihlala ikhuselekile ngaphandle kokuba uyayicima. Sukucima ii-original zakho kwaye usoloko usekele iifoto zakho.
Ukuba ucima ifoto yakho yoqobo isenokubakho kwi-iCloud, kwiiAlbham kwifolda 'esandula ukucinywa', ifoto inokuba ikwiMac yakho, kwiDropbox, kwiifoto zikaGoogle kunye / okanye kwezinye iinkonzo ozisebenzisayo ukugcina iifoto.
Umzobo kunye nomgangatho
Q: Ngaba iWatermark + ixhasa iifayile ze-HEIC ezintsha zeAdpple?
A: Iifayile ze -HEIC, ezihlala zibizwa ngokuba 'ziifoto ezibukhoma', ziqukethe iifayile ezi-2 zoovimba, jpeg kunye nokuhamba. Okwangoku xa ukhetha iFoto ePhilayo sijonga kuphela icandelo le-jpg (ifoto). Inguqulelo yexesha elizayo iya kubonelela ngokukhetha kwi-watermark nokuba yinto ye-jpg okanye i-mov (ividiyo yeTVT).
Q: Ndilwenza njani uhlobo olukhethekileyo lwegraphic, uphawu olunendawo ebonakalayo enokusetyenziswa njenge watermark?
AOlu hlobo lwegraphic lubizwa ngokuba .png ngokubonakala obala.
Ukuba umyili wemizobo uyenzile uze ucele isisombululo esiphezulu sefayile yePNG kubo.
Ukwenza ngokwakho ukusebenzisa i-Photoshop, i-GIMP (yasimahla kwi-Mac kunye ne-Win), i-Acorn, ifoto ye-Affinity okanye usetyenziso olufanayo emva koko landela la manyathelo.
1) yenza umaleko kwaye uncamathisele umzobo wakho wento.
2) umlingo wand yonke imhlophe, emva koko hit Delete. Ushiywe ngumkhangeli webhodi emiselweyo oku
4) gcina njenge-PNG. Ukubonakala obala akunakwenziwa nge .jpg kuya kufuneka kube .png kwifayile ebonakalayo.
Inkqubo yokujonga kuqala kwi-Mac OS inokusetyenziswa ukwenza i-.png ngokubonakala ekuhleni. Okungakumbi apha.
Ngeenkcukacha khangela iwebhu kwisifundo sokudala umzobo wePNG onemibala efihlakeleyo.
Q: Ndiyingenisa njani i-logo / imzobo kwi-Mac, kwi-Win PC okanye kwiwebhu kwi-iPhone / iPad yam.
AKukho iindlela ezininzi.
I-imeyile (elula) - ilogo ye-imeyile okanye umzobo kuwe. Emva koko yiya kule imeyile kwisixhobo sakho esiphathwayo kwaye ucofe kwaye ubambe kwifayile eqhotyoshelweyo ukuyigcina kwizixhobo zeAlbham yekhamera. Emva koko Yenza umzobo obonakalayo weMifanekiso.
I-Airdrop yeApple- ukuba uyayazi Airdrop inokusetyenziselwa ukungenisa ilogo / imifanekiso kwi-iPhone / kwi-iPad. Ulwazi kwi-Airdrop kwi-Mac. Ulwazi malunga nokusebenzisa i-Airdrop kwi-iPhone / iPad. Ukwabela uphawu lwe-png ukusuka kwi-Mac ukuya kwi-iOS, bamba iqhosha lokulawula kwaye ucofe ifayile yelogo kunye nomfumanisi kwi-Mac kunye nemenyu yokudonsa iyavela. Kule menyu khetha Yabelana kwaye kwimenyu elandelayo eyehlayo khetha i-Airdrop. Xa i-Airdrop ivela emva komzuzwana okanye emibini ifanele ibonise isixhobo sakho se-iOS, cofa kube kanye kwaye iya kubonisa inkqubela phambili yokuthumela ifayile kunye ne-beep ekugqibeleni. Ukuba akukho sixhobo se-iOS siyavela ke qinisekisa ukuba i-Airplay ivuliwe kwisixhobo sakho se-iOS. Emva koko Yenza umzobo obonakalayo weMifanekiso.
Ukusayinwa kweWatermark- kunokusetyenziselwa ukungenisa utyikityo okanye ukuskena emfanekisweni. Isebenzisa ikhamera ukuskena uphawu ephepheni kunye nokuvelisa ifayile yePNG. Sebenzisa umzobo wokuqala kuya kuba sisisombululo esiphezulu. Yiya apha ukuze ufunde ngakumbi.
Q: Kutheni ndibona ibhokisi emhlophe ejikeleze ilogo yam yeenkampani?
A: Oku kuthetha ukuba ilogo ozama ukuyisebenzisa yi-jpg kwaye ayisiyo-png ebonakalayo. Ii-PNG's zinokubonisa ngokucacileyo iiJPEG azenzi.
OKUBALULEKILEYO: Landela la manyathelo angentla ukuya yokungenisa, emva koko sebenzisa ifayile yelungelo lefomathi ye-png.
Isilumkiso: Ukuba ubeka i .png kwiAlbham yeKhamera yakho kwaye 'Sebenzisa iSitoreji seFoto' ujongiwe, emva koko .png itshintshelwe kwi .jpg kwaye icinezelwe. Oku kunokuba nokudideka .png oyilayishileyo itshintshelwe kwi .jpg ngaphandle kokukuxelela. Ukuba ungenisa i-logo (itshintshelwe kwi-.jpg) kwiWatermark + uza kufumana ibhokisi emhlophe ejikeleze ilogo (kuba .jpg ayikuxhasi ukubonakala).
IINGXAKI: Kwizicwangciso ze-iOS Ifoto: iCloud. Ukuba useto 'Lungiselela ukugcinwa kwe-iPhone' lukhangelwe oludala ingxaki.
SOLUTION: Jonga uphawu 'lokukhuphela kunye nokugcina oqobo "(jonga umfanekiso weskrini). Olo seto lubhetele nangoko kuba lugcina ifoto yakho yoqobo kunye nefomathi. Enkosi kuLori ngokufumanisa oku.
Kwakhona ungasebenzisi i-iTunes ukungenisa ilogo / iigraphy. Sukuyivula uphawu lwakho kwimifanekiso ekhethiweyo. Ezi zombini zijika i-png ibe yi-jpg eya kubonisa uphawu lwakho kwibhokisi emhlophe.
Q: Ndine-logo / imizobo kwisixhobo sam, ndingenisa njani kwi-iWatermark +
AIinkcukacha zikulo Yenza i-Grassic Watermark ngasentla.
Q: Ngaba iWatermark Pro igcina ifoto kwisisombululo esiphezulu kwi-albhamu yezithombe?
A: Ewe, iWatermark + isindisa kwisisombululo esiphezulu kwi-albhamu yezithombe. Ingakubonisa isisombululo esincitshisiweyo somboniso wakho ukuphucula isantya kodwa imveliso yokugqibela ilingana negalelo. Unakho kwakhona ukuthumela ii-imeyile zemifanekiso eqingqiweyo ngqo kwi-app ekukhetheni kwezigqibo kuquka nesona sigqibo siphezulu. Kungenzeka ukuba ukuba uzama ukuthumela i-imeyile ukusuka kwi-albhamu yezithombe ngokwayo kwaye uku-3g (hayi i-wifi) u-Apple ukhetha ukuthoba isisombululo seefoto. Oko akunanto yakwenza neWatermark. Inayo into yokwenza nokukhethwa yi-Apple, i-ATT kunye nokwenza ubungakanani bebhendi ye-3G.
QKutheni le nto ilogo yam ipeyintwe, iluhlaza kwaye ijongeka iphantsi?
A: Ukuba isisombululo somfanekiso wefoto egqubuthelweyo singaphezulu isisombululo sewatchark, oko kuya kubangela ukuba i-watermark ijongeke ibe mnyama okanye ibhlokhi. Ngalo lonke ixesha qiniseka ukuba uphawu lwakho / umfanekiso we-bitmap ulingana okanye uzisombulule ngaphezulu kunommandla weefoto eziwugubungelayo.
I-logo yakho yimephu encinci. Into oyifaka kuyo (ifoto yakho) kwaye uyilinganisile kangakanani nefuthe kwindlela ejongeka ngayo. Ukuba ilogo yakho ingama-50 × 50 kwaye uyifaka kwi-3000 × 2000 ifoto emva koko i-watermark iya kuba ncinci kakhulu okanye ijongeke kakhulu.
ISOLU: Ngaphambi kokungenisa qinisekisa ukuba ilogo yakho ye-bitmap sisisombululo esifanelekileyo kubungakanani beefoto oya kuba usebenzisa i-watermark kuyo. Iifoto ezithathwe kunye ne-iPhone cicca ngo-2016 okanye kamva, iipikseli ezingama-2000 okanye ngaphezulu kwelinye icala kulungile. Kodwa njengoko ubukhulu beefoto banda ngokuhamba kwexesha kanjalo kuya kuba yimfuneko yesisombululo esibonisa imitha ye-bitmap.
Ukuyilinganisela i-iWatermark isebenzisa i-api / izixhobo ezibonelelwe kuthi yiApple ekwayinto ethi Photoshop kunye nezinye izixhobo zokusebenza. Ngelixa ukuphinda kuguqulwe iinguqu ze-jpg iifoto ezizezona nantlukwano ebonakalayo ilawulwa yi-algorithm ye-jpg, hayi ii -apps, kwaye ngokusisiseko ayinabuntu.
Umbuzo: Kutheni ifoto yam kunye okanye i-watermark ingajongi esona sisombululo siphezulu?
A: Sinciphisa umgangatho wokubukwa kwescreen ukugcina imemori kunye necpu. Ayibonakali ngaphandle kokuba ikwizikrini. Oku akuchaphazeli umgangatho othunyelwe kwelinye ilizwe oya kuthi ufane ngokufanayo nentsusa. Ukuba ufuna kukho ukhetho onokuthi uluvule ukubonisa 'uMgangatho wokujonga kuqala iRetina'.
Q: Ngaba ukulawulwa kwamehlo kuyasinciphisa isisombululo somfanekiso wokuqala?
A: Ayitshintshi isisombululo konke konke.
QNgaba iWatermark iyawatshintsha umgangatho?
A: Njengoko usazi ukuba zonke iiapps ziphinda iifoto abazihlelayo. Ke xa beyigcinayo, iba yifayile entsha. IJPG yifomathi yoxinzelelo, oko kuthetha ukuba yialgorithm esebenza ukunciphisa ubungakanani befoto kunye nokugcina umgangatho obonakalayo woluntu ngokufanayo. Oko kuthetha ukuba iyakuba kancinci kodwa ingabonakali ngokwahlukileyo. Ngalo lonke ixesha ugcina ifoto kuya kubakho ulungelelwaniso olwahlukileyo lweepekseli. Iiphikseli azisoloko zifana kodwa i-jpg yenza konke okusemandleni ukubenza bajonge ngokufanayo. Kuyinyani ngeFotohop kunye nayo yonke into yokuhlela ifoto. Ngamnye wabo usebenzisa izixhobo ezifanayo ukugcina ii-jpg's. Iapps zethu zivumela ulawulo kumgangatho vs ubungakanani ngendlela efanayo nefoto kunye nezinye izinto ezenziwayo. Ungakutshintsha oko kwi-prefs kodwa asiyicebisi kuba akunakwenzeka ukuba ubone umohluko kwaye kunzima ngakumbi ukuxelela ukuba yeyiphi engcono. Unokufuna ugoogle kwaye ufunde malunga 'nobungakanani vs umgangatho' ukuba awuqhelananga.
Useto / Iimvume
Q: Incoko yababini yathi andinayo imvume yokufikelela kwiThala leeNcwadi, ndenza ntoni?
A: IWatermark + ikuvumela ukuba ukhethe iifoto okanye iividiyo zokwenza i-watermarking. Ukufikelela kwakho kwiThala leencwadi leFoto kuthintelwe ngandlela thile. Ukuba usebenzisa iNkqubo yeApple yexesha elikhethiweyo cima kwaye ubone ukuba iWatermark + iyakwazi ukufikelela. Kungenzeka nokuba umzali / umgcini wakho asete iimvume zakho zexesha lesikrini ezikuthintelayo ekusebenziseni iWatermark + ngokupheleleyo. Ukuba ingxaki ayilixesha leScreen yiya ku: Ubumfihlo: Iifoto: iWatermark + kwaye uqiniseke ukuba isetelwe 'Ukufunda nokubhala' kunye nokufikelela kwikhamera yiya ku: Ubumfihlo: Ikhamera: iWatermark + kwaye uqiniseke ukuba ivuliwe (eluhlaza).
Q: Ndiyisusa njani i-iWatermark + nayo yonke idatha yayo (iisethingi kunye nee-watermark) kwi-iPhone entsha okanye i-iPad?
AI-Apple ilawula oku hayi kuthi. Nantsi into abayithethayo.
Kukho izinto ezi-2 zokuhambisa usetyenziso kunye nedatha. Zombini kufuneka zibekho ukuze ube nazo zonke iisetingi zangaphambili. Nantsi enye inkcazo elungileyo.
Q: Ndizigcina njani iisetingi zam (zonke ii-watermark zam) xa ndicima i-App yam?
A: Le yinkcazo elungileyo yolwazi lwe-arcane.
QNdisandula ukuthenga usetyenziso, kutheni le nto 'Yenziwe ngeWatermark' isabonakala kwiifoto zam ezithunyelwa ngaphandle?
AUsavula kwaye usebenzisa iWatermark + Simahla / eLite hayi uhlobo oluhlawulelweyo lweWatermark +.
isisombululo: Cima iWatermark + yasimahla / iLite eneSimahla / iLite kwibhanile eluhlaza eluhlaza kwi icon. Sebenzisa ingxelo ehlawulelweyo endaweni yoko.
Q: Ndenza ntoni ukuba ndinombuzo wentengiso?
A: Asilawuli intengiso ye-iOS kwaphela. I-Apple ilawula ukuthengisa ngokupheleleyo kwii -apps ze-iOS. UGoogle ulawula ukuthengisa kuGoogle Play. Iapile kunye noGoogle abazabelani ngamagama / nge-imeyile okanye ngalo naluphi na ulwazi kubani abathenga iiapps nathi. Asinakongeza okanye sicime iodolo ephindiweyo. Kuyo yonke imibuzo yokuthengisa nceda unxibelelane noApple okanye uGoogle.
Q: Ndilahlekelwe yifowuni kwaye ndifuna ukukhuphela iWatermark + kwakhona. Kufuneka ndihlawule kwakhona?
A: Hayi. Iivenkile ze-App zikuvumela ukuba uphinde ukhuphele ii -apps osele uzithengile kwaye imigaqo-nkqubo yazo ikwezo ziqhagamshelo. Ukuba uthenge ifowuni entsha kwaye usuka kwi-OS usiya kwenye okanye ngokuchaseneyo kuya kufuneka uphinde uthenge kuba asilawuli intengiso abayenzayo.
Q: Ukuba ndifuna ukusebenzisa i-iWatermark kuzo zombini i-iPad ne-iPhone, ngaba kufuneka ndihlawulele ii -apps ezimbini okanye enye?
A: I-iWatermark + iyinkqubo ye-universal, isebenza kakhulu kwi-iPad / iPhone, ke, akukho mfuneko yokuhlawula kabini. I-iWatermark efanayo isebenza kakuhle kwi-iPhone kunye ne-iPad. Ngokomthetho ungumnini wazo zombini kwaye unokuba nesoftware yakho kuzo zombini. Kwakhona iApple inesicwangciso sosapho. Esi sicwangciso sivumela ukuba uthenge i-app kube kanye wonke umntu ekuqeshisweni kosapho afumane ukusebenzisa i-iphone kwi-ipad yakhe.
QNgaba bonke abenzi beapps benza izigidi zeedola?
A: I-Pokemon kunye neminye imidlalo inokuyenza loo nto kodwa isetyenziselwe i-niche encinci ye-watermarking, ngelishwa kuthi, ayenzi njalo. IWatermark + sisuntswana lesoftware. Kwiminyaka elishumi eyadlulayo akukho mntu wayenokukholelwa ukuba kunokwenzeka. Okwangoku abantu abaliqapheli inani lomsebenzi kwinkqubo, amaxwebhu, inkxaso yezobuchwephesha, iigrafiki, umlawuli, ukuthengisa kunye nokuhlaziya okuqhubekayo okubandakanyekileyo kwaye yeyiphi na into engaqhelekanga yokuthenga iWatermark ngeedola ezimbalwa. I-Apple ibisoloko izuza ngokunzulu kubavelisi benkqubo yeqela lesithathu benza isoftware yezixhobo zabo zekhompyutha. Kwivenkile yeapple iApple ithatha iipesenti ezingama-3 zokusebenza. Oko kuthetha ukuba $ 30 yeWatermark Apple igcina i $ 3.99. Kukho izigidi zabaphuhlisi beapps kwaye iApple ifumana iipesenti ezingama-1.20 kuko konke ukuthengisa esisizathu esinye sokuba yinkampani yezigidigidi zeedola. Ukusuka kwintengiso enye sifumana u-30 ukubhatalela izixhobo zekhompyutha, iinkqubo, inkxaso yezobuchwephesha, intengiso, iigrafiki, umlawuli, njalo njalo, impendulo kukuba, asisityebi. Ukuba uyayithanda i-iWatermark + kwaye uyayiqonda indlela eyahluke ngayo kwaye ihambele phambili xa ithelekiswa nezinye ii-watermarking zokusebenza kwaye ufuna ukuyifumana inamandla ngakumbi, ke nceda uxelele abanye ngayo. Ukuba bathenga kukunceda ufumane usetyenziso olungcono. Enkosi!
Q: Kuza njani iWatermark + ayisiyo # 1 kwivenkile ye-Apple App xa ndikhangela phantsi kwewatermark? Umntu othile undixelele ngeapp yakho kodwa kuthathe iyure ukuyifumana.
AUmbuzo omhle kakhulu lowo. Inxulumene ne-SEO (ukukhangela kweinjini yokukhangela) ezizilungelelwaniso ezilawula into eza kuqala xa ukhangela igama eliphambili okanye ibinzana kuGoogle, Ivenkile yeApple okanye ezinye iinjini zokukhangela. Ukukhangelwa kweVenkile yeApple akubeki ezonaapps zilungileyo kuqala kodwa kubonisa iiapps kuqala ezinamagama athile, amagama aphambili, yinkampani edumileyo, njl.Ngelishwa, ezo zinto azihlali ziguqulela ekufumaneni eyona app. Ihlala ifumana ii -apps zeenkampani ezinkulu ezisisiseko kunye neeapps ezisebenzisa umdlalo weSEO. Ukushwankathela uphando ngumceli mngeni kunye nokuqhubeka kweApple. Inyanzela abaphuhlisi ukuba bachithe ixesha elininzi lokudlala i-SEO kunokugxila ekwenzeni iiapps ezintle. Sikhetha ukusebenza ekuphuculeni ii -apps kunye nokongeza amanqaku aluncedo.
QNdizisebenzisa njani iifonti ezivela kwiWatermark + kwiMac okanye kwiWin Version okanye kwenye iapps yedesktop?
A: Ukufumana iifonti kwi-iWatermark + i-iPhone app kufuneka ufumane apho iapp ye-iPhone igcinwe khona kwi-Mac.
QUbungakanani bohlobo lwefonti buvumela kuphela ukukhetha ubungakanani befonti ukusuka kwi-12 ukuya kwi-255. Ngaba singayenza ibe nkulu?
AUkuchwetheza ubungakanani kwintsimi esecaleni kwesilayidi kunokunika ubungakanani ukusuka kwi-6 ukuya kwi-512 pts. Ngelixa isilayidi sivumela ukurhuqa kuphela phakathi kwe-12 ukuya kwi-255 pts.
Q: Ndinazo njani iifonti ezahlukeneyo kunye nobungakanani befonti kwilwimi enye yeetermark?
A: Akunakwenzeka kwi-watermark enye yokubhaliweyo. Isisombululo kukwenza iifayile zokubhaliweyo ezibhaliweyo ezimbini ezahlukeneyo.
Q: Zingaphi imvelaphi / iikopi zefoto ezikhoyo ngewermarking.
AKukho iimeko ezi-3 ezahlukeneyo:
1. Ukuba uthatha ifoto kunye neeapile (okanye ezinye izinto) zekhamera yintsusa, iWatermark + yophinda-phinda kunye neelatermark eziphindaphindiweyo.
2. Ukuba uthatha ifoto ngaphakathi kweWatermark + leyo ifanelwe ubonwe ngumntu omnye kuphela.
3. Ukuba usebenzisa i-watermark usebenzisa iWatermark + ngaphakathi kweefoto ze-Apple njenge-Editing Extension ke yahlukile kuba usetyenziso lweefoto ze-Apple aluphindi eyokuqala, iyahlela ngokwamaleko kwaye ungalubuyisela olo hlengahlengiso. Iimpawu zewarkmark zeWatermark zifakwa njengomaleko kwiapp yeApple. Khetha 'Hlela' kwaye ucofe u 'Buyisela' ukususa i-watermark efakwe ngaphakathi kweefoto zeApple zeApple.
Q: Ndikhetha 'Musa ukuvumela iWatermark + ukufikelela kwiifoto' ngengozi. Ndiyivulela njani i-iWatermark?
A: Yiya kuseto: imfihlo: iifoto, fumana iWatermark + kuluhlu lweapps kwaye uvule 'ukufikelela kwiifoto' zitshintshele iWatermark +.
Q: Ngaba kukho isilinganisi sobungakanani kwiifoto?
A: Ewe. Rhoqo ngonyaka iba nkulu kancinci. Oku kwenza ukuba kube lula kubaphuhlisi abanjengathi ukuxhasa ukuvula kunye nokusebenzisa imifanekiso emikhulu. Kuyamangalisa ukuba ifowuni inokuvula iifoto ze-SLR kodwa kukho imida. I-SLR eNtsha yenza iifoto eziphezulu rhoqo ngonyaka kwaye ii-iPhones ezintsha zinokuvula iifoto eziphezulu rhoqo ngonyaka. Luhlanga.
A: Ukuhambisa i-watermark yichukumise nje ngomnwe wakho kwaye uyihudulele naphi na apho ufuna khona. Ungabutshintsha kwakhona ubungakanani befonti, isikali (usebenzisa ukucofa / ukusondeza) kwaye utshintshe i-engile (ukujija kweminwe emibini) ngokuthe ngqo ngochukumiso. Xa ujikelezisa i-engile ngeminwe emibini uya kuqaphela ukuba ii-watermark zitshixela kumanqaku akhadinali 0, 90, 180, 270 degrees. Indawo yewatch inokutshintshwa isuswe kwinto ebizwa ngokuba yi-'Position 'ebekwe ezantsi kuseto kwii-watermark ezininzi.
A: Ewe, nayiphi na isithombe esibonisiweyo osigcinayo kwiFoto Album okanye uthumela nge-imeyile unalo lonke ulwazi lwangempela lwe-EXIF kubandakanya ulwazi lwe-GPS. Ukuba ufuna i-GPS ihlala isuswe ke kukho ukuseta oko kwi ukhetho. Ungajonga i-ExIF kunye nezinye Apha.
Q: Ndithetha isiDatshi kodwa iapps isibonisa kum ngesiSwedish, ndiyilungisa njani le nto?
A: Inokwenzeka kwiimeko ezinqabileyo, inento yokwenza ne-iOS. Ungaseta ulwimi lwenkobe nolwimi lwesibini kwinkqubo ayithandayo. kuba azikho ezinye iilwimi zalapha ekhaya zeWatermark + kuphela isiNgesi uhlelo lokusebenza luzama ukuya kulwimi lwesibini kwaye ngamanqaku athile kuya kufuneka ukuba usete isiSwedish. Vala i-app, yiya kwinkqubo ekhethwayo kwaye usete kwakhona kumaDatshi nje, qala kabusha. Ngoku le nkqubo iza kuvulwa nje ngesiNgesi.
Q: Isebenza njani iPhoto Stream? Ngaba ndongeza ifoto ku-Photo Stream endaweni yokuHola kweKhamera?
A: Kwiphepha le-Watermark chukumisa i-watermark kwaye utsale ngasekhohlo, oku kuya kubonisa iqhosha elibomvu lokususa kwicala lasekunene, uchukumise ukuba ucime loo watermark. Okanye uye ku-organic apha ngasentla ngasekhohlo kwiphepha apho unokucima ii-watermark okanye uzirhuqe ujikeleze ukutshintsha iodolo yazo.
Q: Ndilayisha njani kuFlickr?
A: Khuphela usetyenziso lweFlickr kwivenkile yeapp. Ikhululekile kwaye inokwabelana ngokwabelana nge-iOS. Oko kuthetha ukuba xa uthumela ngaphandle kwiWatermark + ingaya ngqo kwi “Flickr. Khawukhumbule nje ukugcwalisa ulwazi lwakho lomsebenzisi ngokubanzi: Useto: Flickr kwisixhobo sakho se-iOS okokuqala ukuseta ukungena ngaphakathi.
Q: Ndiqaphele emva kokudlulisela ividiyo kwi-Mac yam ukuba ividiyo icinezelwe?
A: Le ayisiyiyo iWatermark + kodwa inokuba yinkqubo oyisebenzisayo ukudlulisela ividiyo kwi-Mac okanye kwiPC. La manqaku aneenkcukacha ezithe kratya:
OSXDaily -Dlulisa iVidiyo yeHD kwi-iPhone okanye kwi-iPad kwiKhompyuter yakho
Isoftware- Ungayitshintsha njani iividiyo ukusuka kwi-PC iye kwi-iPhone ngaphandle kwe-iTunes
I-iWatermark imida ekhoyo ngoku nayiphi na ifoto engaphezulu kwe-100 MB engaxinwanga inokubangela impazamo yememori. Ubungakanani obungaqwalaselwanga buhlukile kubukhulu befayile. Unokwazi ukuvula ifayile njenge-pano kwis skrini esingezantsi kodwa ukuya kwi-watermark kuthatha ubuncinci imemori ephindwe kabini. Eli nani siqinisekile ukuba liya kuqhubeka liphucuka minyaka le.
Xa sele uyithethile yonke loo nto, zive ukhululekile ukuzama ukuba ufumana isilumkiso esingezantsi, ayizukulimaza nantoni na kwaye siyifumene isebenza rhoqo kwaye ixhomekeke kwisixhobo onaso. Siyathembisa ukuba kunokwenzeka ngakumbi kwihardware yee-iPhones kunye nee-iPads siya kuyandisa into enokwenzeka kwisoftware.
Q: Kutheni le nto kufuneka ndibukele ii-photos endizibeka kuFacebook, kuTwitter, ku-Instagram, Tumblr, njl.
A: Owona mbuzo mhle! Kuba uninzi lwezo nkonzo zisusa imethadatha engabonakaliyo kwifoto yakho, ngoko akukho nto ikunamathisela loo foto ngaphandle kokuba ubeka i-watermark ebonakalayo kuyo okanye ingabonakali kuyo. Nabani na unokudonsa umfanekiso wakho we-Facebook kwi-desktop yakhe kwaye asebenzise okanye abelane nabanye ngaphandle konxibelelwano phakathi kwakho kunye nefoto yakho kwaye akukho lwazi kwifayile ethi uyile okanye yeyakho. I-watermark iqinisekisa ukuba wonke umntu ucacile kwinto yokuba ifoto ye-IP yakho (impahla yelungelo lokuqonda). Ifoto oyithabathayo inokubangelwa yintsholongwane. Lungela. Umnini weefoto ezitshiweyo kusenokwenzeka ukuba amkelwe, adume kwaye mhlawumbi ahlawulwe. Ukubona ukuba yintoni metadata isuswe ngu-Facebook, Twitter, Instagram, Google + njl. Jonga apha.
Q: Ngaba ikhona yezi watermark zithintela abantu ukuba bade kubugcisa endibuthumela kwi-intanethi kwaye bayisebenzisele iinjongo zabo?
A: I-watermark ilumkisa abantu abaninzi kwaye ngobukho bayo, yenza abantu bazi ukuba umnini uyikhathalele ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. I-watermark ayibanqandi abantu abazimiseleyo. Kunye noMthetho weLungelo lokushicilela, i-watermark ngokuqinisekileyo iyanceda ukukhusela ifoto yakho.
Asingabameli kwaye asiboneleli ngcebiso. Apha ngezantsi kuninzi lwethu. Nxibelelana negqwetha lakho ngeenkcukacha zomthetho.
Kubalulekile ukuqonda umthetho weLungelo lokushicilela laseMelika kwiifoto. Umthetho uthi umfoti unelungelo lokushicilela kwifoto nganye abayifotayo. Ukwahluka kuxa umfanekiso uwela kudidi "lomsebenzi owenzelwe ukuqesha".
Ilungelo lokushicilela iifoto lithetha ukuba ngumnini wepropathi njengepropathi. Ngobunini, yiza amalungelo akhethekileyo kule ndawo. Ilungelo lokushicilela elinemifanekiso, amalungelo obunini aquka:
(1) ukuphinda uvelise ifoto;
(2) ukwenza imisebenzi esuselwa kwifoto;
(3) ukuhambisa iikopi zefoto kuluntu ngokuthengisa okanye ngokudlulisela ubunini, okanye ngokuqeshisa, ngokuqeshisa, okanye ngokubolekisa;
(4) ukubonisa ifoto esidlangalaleni;
Ifunyenwe kumthetho welungelo lokushicilela e-US e-17 USC 106 (http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html #106)
Ukutyikitya kwakho okanye enye i-watermark ebonakalayo enophawu lwentengiso inokwandisa umonakalo. Ukusuka kwinto endiyibonileyo yomthetho kwi-intanethi, umfanekiso nge-watermark unokunyusa umonakalo ukuya kuthi ga kwi-$ 150,000 endaweni ye- $ 30,000 nje. Kuyavakala ukubeka i-watermark ebonakalayo kwifoto ukuya: 1) ukuba abantu bayazi ukuba yipropathi yakho enengqondo kwaye i-2) yonyuse ukonakaliswa ukuba babanjiwe ngabom bengayithobeli okanye bayisuse i-watermark yakho kwaye basebenzise ifoto yakho.
Ukuba umfoti awubhalisanga lo mfanekiso ngaphambi kokophula umthetho, umfaki-zithombe unokufuna "owona monakalo." Ukuba umfaki-zithombe ubhalise ngaphambi kokuba kuqalise ukwaphula umthetho, umzobi-zithombe unokukhangela owona monakalo okanye ngowomthetho osemthethweni. Iimpawu zamanzi zibalulekile kuphela xa kusenzeka kumonakalo osemthethweni, kwaye kuxa kuxhomekeka ekuqinisekiseni ukuba ngabom na. I-watermark ngokwayo ayonyusi umonakalo okhoyo. Abafotayo abangabhalisi amalungelo abo okushicilela ngaphambi kokuqala kolwaphulo-mthetho baya kuba nesibonelelo esincinci somthetho ngokusebenzisa iiwatchark.
Ukuba bekukho ulwazi lokulawulwa kwelungelo lokushicilela kwimethata ebethelelwe kwifayile, OKANYE ukuba bekukho i-watermark ebandakanya ulwazi lolawulo lwe-copyright, kwaye ukuba umxhaphazi ususe okanye utshintshe imethata okanye i-watermark, kwaye ukuba umfaki-zithombe unokungqina ukuba injongo Ukususwa kwemethadatha okanye i-watermark yayikukufihla, ukukhuthaza okanye ukuqhuba ngokuchasene nelungelo lokushicilela, emva koko umonakalo okhethekileyo unokufumaneka kumfoto phantsi kweDigital Millenium Copyright Act (DMCA). Nangona kunjalo, ukuba i-watermark yayingelilo "ulwazi lolawulo lwe-copyright," akukho sohlwayo sokususwa okanye ukuguqulwa, akukho sibonelelo sokubakho kwe-watermark, ngokusemthethweni okanye ngenye indlela. Umzekelo, ukuba i-watermark ligama nje okanye ibinzana okanye uphawu okanye i-icon, akukho zibonelelo ze-watermark, ngaphandle kokuba inxibelelana (1) nesazisi somnini welungelo lokushicilela (njengegama, ilogo, ulwazi loqhagamshelwano) okanye (2) ) Chonga ulwazi ngomfanekiso, okanye (3) ulwazi ngamalungelo (isaziso selungelo lokushicilela, inombolo yobhaliso, ingxelo yamalungelo, njl.)
Ukuba umfoti ubhalise ifoto ngaphambi kokuba kuqale ulwaphulo-mthetho, i-watermark inokuzuzisa umfoti. Okanye hayi.
(1) Iwashi inokuthintela ibango lolwaphulo-mthetho olungenacala. Ukuba i-watermark inokwenzeka kwaye ibandakanya isaziso esisemthethweni sokushicilela, loo nto iphula umthetho uthintelwe ngumthetho ekubeni ibango “lolwaphulo-mthetho olungenatyala” kwilinge lokunciphisa umonakalo osemthethweni ukuya kuthi ga kwi-200 yeedola. Isaziso selungelo lokushicilela "esisebenzayo" sinezinto ezi-3: (a) igama lomnini welungelo lokushicilela, (b) uphawu lwelungelo lokushicilela, kunye (3) nonyaka wopapasho lokuqala lomfanekiso. Ukuba kukho enye yezi zinto zi-3 ilahlekileyo (unyaka ulahlekileyo, igama elilahlekileyo, uphawu lwelungelo lokushicilela) isaziso selungelo lokushicilela asisebenzi kwaye asinakusetyenziselwa ukuthintela owophula umthetho ukuba enze amabanga aphula umthetho. Umnini welungelo lokushicilela unokufaka endaweni yesangqa igama elithi "copyright" okanye isifinyezo esithi "Copyr" kodwa akukho magama amkelwe ngumthetho kwamanye amazwe. Akukho nanye kwezi zinto zikhankanywe apha ngasentla esebenza kwimeko apho umfoti angaphumeleliyo ukubhalisa ifoto ngaphambi kokuba kuqale ulwaphulo-mthetho.
(2) Isenzo sokususa i-watermark sinokubonisa ukuba uyavuma. Umonakalo ngokomthetho (ofumaneka kuphela ukuba umfoti ubhalisile le foto ngaphambi kokophulwa komthetho) uphakathi kwe- $ 750 kunye ne- $ 30,000 ngomfanekiso otyhidiweyo. Oku kuthetha ukuba inkundla inenkululeko yoku amabhaso ama-750 okanye ama-30,000 eedola. Ukuba umfoti uyakwazi ukubonisa ubungqina kwinkundla ukuba ubhaliso lwenziwa “ngabom” ke uluhlu lomonakalo lunyuka uye kuma- $ 30,000 ukuya kwi- $ 150,000. Iinkundla ezinqabileyo zokuwongwa awona aphezulu. Kunzima ukubonisa ubungqina bokuba waphula umthetho ngabom. Ngamabomu kuthetha ukuba owophula umthetho wayesazi ukuba ukusetyenziswa kwakungekho semthethweni, emva koko waqhuba ngokophula ngabom. Yinto engqondo. Ukuba i-infringer isusile okanye yaguqula i-watermark ebonakalayo okanye ebilayo, oku kunokubonakalisa ukuthanda, ngaphandle kokuba i-watermark ityalwe ngengozi, okanye ukuba ityalwe ngaphandle kwenjongo yokufihla ukophulwa. Kwakhona, ukuba umfaki-zithombe akaphumelelanga ukubhalisa lo mfanekiso ngaphambi kokophulwa komthetho, ukuthanda ukuthathelwa ingqalelo akujongwa yinkundla, kwaye ubukho / ukususwa kwe-watermark akunanto yakwenza noku.
OKUBALULEKILEYO: Ukutyikitywa kukaJohn Hancock, uBen Franklin, uGalileo yimizekelo nje yeewatch graphic. Zizityikityo zokwenene zaba bantu. Nganye yavavanywa ngaphakathi, yafakwa ekhompyutheni, yangasemva isuswe yagcinwa njengeefayile ze-.png. Ezi zibandakanyiwe ukuzonwabisa kunye nokubonisa okunokwenzeka. Sincoma ukuba usebenzise ityikityo yewwatermark kwiWatermark + ukwenza utyikityo lwakho okanye usebenzise ilogo yakho kwiifoto zakho. Jonga ulwazi kwi-Q & A apha ngasentla malunga nendlela yokwenza nokubeka isiginitsha okanye ilogo yakho kwiWatermark. Ukuba awufuni ukwenza i-watermark yakho yemizobo ungasoloko usenza ii-watermark zombhalo njengoko uzidinga.
Ukuphucula ukusuka kwisahlulo esingasimahla seWatermark + cofa iqhosha kwiphepha eliphambili. Oku kuya kukusa kwivenkile yokuthenga ye iTunes kunye neWatermark +. Okanye ukhangele i-iWatermark + kwivenkile ye iTunes ye iTunes okanye kwiGoogle Play.
Enkosi ngokuphucula! Kukho inani elimangalisayo lexesha kunye namandla awele ekwenzeni le nkqubo inesidima kakhulu. Ngokuthenga, wena kunye nabahlobo bakho baxhasa ngokuthe ngqo ukuqhubekeka kokuvela kwale app. Enkosi kubasebenzi kwiPlum emangalisayo!
Senza iiapps zeWatermark kuwo onke amaqonga. Zonke ziyafumaneka apha:
IncokoMaker Ngaba isisixhobo se-iOS esimnandi, esisebenzayo sokufunda kunye nesisebenzayo sabantwana abancinci ukunceda ukugcina inqanaba loyikiswa e-bay. Yipocket mobile kunye ne-teleprompter kwaye inceda nabani na ukuba aququzelele kwaye anike iintetho ezingcono, afunde amazwi, ayonwabele i-rap, acaphule imibongo, aqonde igrama kunye nokuxabisa imbali.
Ngaba wena okanye inkampani yakho nifuna usetyenziso lwesiko okanye i-database? Nxibelelana nathi ukuze sixoxe ngezimvo zakho.
Nceda usithumelele iingcebiso zakho kunye neebugs. Imeyile Apha. Ukuba unefoto entle kunye ne-watermark zive ukhululekile ukuthumela kunye. Siyakuvuyela ukuva kuwe.